ဗဟိုဘာသာစကားကိုကျောင်း, ကိန်းဘရစ် - သင်၏အဖွဲ့တွေ့ဆုံမည်
ဂျိုအန်း Venter: ကျောင်းအုပ်ကြီး လေ့လာရေး & ညွှန်ကြားရေးမှူး (BA ဘွဲ့ UED Delta)
ဂျိုအန်း 1984 ကတည်းကဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်, ပြင်သစ်နှင့်တောင်အာဖရိက၌ဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့သည်။ ဗဟိုဘာသာစကားကိုကျောင်းလာမယ့်မီ, ဂျိုအန်းလန်ဒန်မြို့တွင်ဆရာမလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများအပြေးအဖြစ်တစ်ဦးစာတတ်မြောက်ရေးအစီအစဉ်နှင့်မြောက်လန်ဒန်တစ်အိမ်မှာကျူရှင်အစီအစဉ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ကြောင်းမတိုင်မီကသူမကလန်ဒန်မြို့ရှိတစ်ဦးက Business ကောလိပ်မှာလေ့လာရေး၏လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏စိတ်အားထက်သန်မှုအထူးသဖြင့် IELTS နှင့် FCE အတန်းစာမေးပွဲတွင်အတန်းဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်ရှိသည်ပေမယ့်သူမလည်းပေ, ESOL နှင့် Business အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးလည်း 13 နှစ်ပေါင်းပြင်သစ်ဦးစီးဌာနသို့ပွေးလေ၏သိရသည်။ သူမကရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ချစ်သောသူသူမ၏အခမဲ့အချိန်မှာတော့ကဗျာရေးသားခြင်း, စန္ဒရားကစားခြင်းနှင့်သစ်တောအဘို့အသွားသူမခင်ပွန်းမာ့ခ်နှင့်အတူလမ်းလျှောက်။
James Dennis - လေ့လာရေးနှင့်စာမေးပွဲအရာရှိလက်ထောက်ဒါရိုက်တာ (BSc DELTA)
ဂျိမ်းတက္ကသိုလ်စားနပ်ရိက္ခာသိပ္ပံဘာသာရပ်ကိုလေ့လာများနှင့်ချောကလက်ထုတ်လုပ်သူ Cadbury ရဲ့အလုပ်လုပ်တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းရုရှားနှင့်ပြင်သစ်လေ့လာခဲ့ပြီးမှ, ဂျိမ်း (?! တကယ်ဂျိမ်းစ်) သူချောကလက်မှဘာသာစကားများပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းသဘောပေါက်ကာအင်္ဂလိပ်ဆရာမဖြစ်လာရန်လေ့လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ. ဂျိမ်းရုရှားနှင့်ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်ဗြိတိန်အတွက်နွေရာသီကျောင်းများမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့သညျ။ မိမိအအားလပ်ချိန်မှာအချိန်အတွက်သူစက်ဘီးစီး likes ။ ယာကုပျ, Bideford ထံမှမူလက Devon သည်နှင့် Plymouth Argyle, သူ့အကြိုက်ဆုံးဘောလုံးအသင်းကိုတစ်ဦးအသည်းအသန်ထောက်ခံသူဖြစ်ပါတယ်။ ဂျိမ်းစ်က "တကယ်က၎င်း၏ကျောင်းသားများကိုဂရုစိုကျဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဗဟိုဘာသာစကားကိုကျောင်းတွင်ဆုံးမဩဝါဒပေးကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီးအမှန်တကယ်၎င်း၏ပထမဆုံးဦးစားပေးကြသည်။ ဒါဟာအစတစ်ကယ့်ကိုဖော်ရွေအသင်းပါပဲ။ " ဟုဆို
ဟိုင်ဒီ Moat: ဆရာ (MA CELTA)
ဟိုင်ဒီ 2014 ၏နွေရာသီအတွက်ကျောင်းပေါင်းခဲ့သည်။ ကြောင်းခြင်းမပြုမီသူမစာတတ်မြောက်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလေ့လာနှင့်ကျေးလက်ဒေသများရှိကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအဖြစ်လေ့ကျင့်ရေးဆရာ, ဆရာမများတွင်စာတတ်မြောက်ရေးအစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ "ဌသင်ကြားမှု၏ဖန်တီးမှုကိုချစ်" ဟိုင်ဒီကပြောပါတယ်။ "ပျော်စရာများနှင့်ထိရောက်သောသင်ယူခြင်းနှင့်ကကျောင်းသားများကိုယုံကြည်မှုအတွက်ကြီးထွားကြည့်ဖို့ဒါကြိုးဖြစ်ပါတယ်စေရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုအမြဲရှိပါတယ်။ " ဟိုင်ဒီတစ်စိတ်အားထက်သန်အပျော်တမ်းပန်းချီဆရာဖြစ်တယ်, ကခုန်ချစ်သောသူနှင့်ကျောင်းသားများကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာနေ့လယ်စာမှဆောင်ကြဉ်းသောအစားအစာကိုမြည်းစမ်းအေးအေးဆေးဆေး။
Bethany Tranter: ဆရာ (MAHons CELTA)
ဗေသနိရွာသည်မူလက (ကင်းဘရစ်အတွက်အငြင်းပွားဖွယ်ရာ, ဒါပေမယ့်သူမရဲ့အလွန်အကျွံဆန့်ကျင်ကြောင်းကိုင်ထားကြဘူး!) Oxfordshire ကနေလာပါတယ်။ သူမပထမဦးဆုံးအင်္ဂလိပ်သှနျသငျခစျြရှာဖွေတွေ့ရှိဘယ်မှာသူမသည်စကော့တလန်အတွက် Aberdeen တက္ကသိုလ်ပြင်သစ်နှင့်ဘာသာဗေဒလေ့လာခဲ့သည်။ သူမသည်4နှစ်ပေါင်းစကော့တလန်, အီကွေဒေါနှင့်စပိန်၌ဆုံးမဩဝါဒများနှင့် 2017 ကတည်းကကင်းဘရစ်အတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ငါတကယ်ဗဟိုဘာသာစကားကိုကျောင်းကင်းဘရစ်မှာနွေးထွေးသောမိသားစုလေထုထဲတွင်အလုပ်လုပ်နေနှင့်တတ်နိုင်သမျှတိုင်းလမ်းအတွက်ကျောင်းသားများကိုကူညီပံ့ပိုးရန်ရည်ရွယ်ထားသူတစ်ဦးအဖွဲ့သည်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းကိုချစ် "လို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်မကိုလည်းငါသည်ငါ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌ပျော်မွေ့သောအမှုအရာတို့ကိုယူနိုင်ဖြစ်ခြင်းတန်ဖိုးထား နှင့်လူမှုရေးအစီအစဉ်အတွက်ပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများသို့သူတို့ကိုငါလှည့်။ " သူမ၏အခမဲ့အချိန်မှာတော့ဗေသနိရွာ, ချက်ပြုတ်သူမ၏စပိန်, စက်ဘီးစီးလေ့ကျင့်ကတ်များအောင်, စကော့တလန်ကခုန်ခြင်းနှင့်တောအုပ်၌လမ်းလျှောက်ဘို့မယ် likes ။
ပူကျင့်ရှင်း Serrano: အုပ်ချုပ်ရေး & Accounts ကို Manager က (BA)
ပူကျင့်ရှင်း 2003 ကတည်းကကျောင်းမှာခဲ့ထို့ကြောင့်ကျောင်းနှင့်၎င်း၏သမိုင်းအကြောင်းအများကြီးသိတယ်သိရသည်။ သူမလည်းကဒီမှာလာမယ့်ရှေ့တော်၌ကင်းဘရစ်အတွက်3တခြားဘာသာစကားကျောင်းများမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာစကားများကိုလေ့လာဘဲလျက်မိမိကိုယ်ကိုပူကျင့်ရှင်းစပိန်နှင့်ပြင်သစ်ပြောသောနှင့်အခြားနိုင်ငံများမှလူတွေကိုတွေ့ဆုံအတော်ပင်။ အတူတူဂျိုအန်းနှင့် Gerry နှင့်အတူသူတို့လေ့လာဖို့ကဒီမှာလာမှီ, သူမကကျောင်းသားများကိုထံမှအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့်အတူကူညီပေးသည်။ သူမသည် "ကျွန်မနောက်ဆုံးတော့သူတို့နှင့်အတူဤမျှလောက်များစွာသောအီးမေးလ်များကိုဖလှယ်ပြီးနောက်ကျောင်းသားများကိုတွေ့ဆုံရန်အရမ်းအကြိုးကိုရှာပါ။ " ဟုဆို သူမအလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအခါ, ပူကျင့်ရှင်းသူမ၏မိသားစုပြီးနောက်ရှာနေအလွန်အလုပ်များထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Gerry Beves: နေထိုင်ရန်နှင့်စျေးကွက် (BAHons PGDip CELTA)
Gerry အများအပြားခွက်၏သူဖြစ်၏။ သူ 2014-2015 အတွက် CLS မှာဆုံးမသွန်သင်ခြင်းနှင့်လက်သမားတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအသင်းတော်၏သင်းအုပ်ဆရာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်သကဲ့သို့ကောင်းစွာ Gypsy နှင့်ခရီးသွားများအတွက်မှစာတတ်မြောက်ရေးလည်းဆုံးမသွန်သင်ထားသည်။ သူ2ကလေးတွေနဲ့အတူလက်ထပ်သည်။ သူကကျောင်းရဲ့ခရစ်ယာန်တန်ဖိုးများအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ်ပြီးမိမိမိသားစုနှင့်အတူငါးဖမ်း likes, ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများ, ဂစ်တာကစားစက်ရုပ် code များနှင့်တည်ဆောက်ဖို့ဘယ်လိုသူ၏သမီးသူ့သားဆုံးမဩဝါဒ ပေး. , ဂစ်တာ, တယောနဲ့ banjo သင်ယူကူညီပေးနေ, ညစာထွက်သူ့ဇနီးယူ (သူမပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အခါ) စာအုပ်များရေးသားခြင်းနှင့်ပျင်းရိဖြစ်ခြင်း!
အဆိုပါကျောင်းသည်အထူးသဖြင့်ယခုနှစ်အလုပ်ရှုပ်ကြိမ်အတွင်း, အချိန်ဖို့အချိန်ကနေပေးဝေရေးဆရာ, ဆရာမပါဝင်နေသည်။ ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်အသင်းအဖွဲ့ဝင်အချို့နေသောခေါင်းစဉ်:
GAIL Featherstone MAHons (ပြင်သစ်) & MA TESOL
GAIL ကိုလေ့လာရှိမုန်, တစ်ဦးကိုဗြိတိသျှသံတမန်မှသူမ၏လက်မထပ်မီပြင်သစ်နှင့်ဂျာမန်သင်ပေးတယ်။ အတူတူသူတို့3ကလေးများနှင့်တရုတ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ဆွစ်ဇာလန်နှင့်မလေးရှား၌နေ၏။ GAIL ပြည်ပမှာသူမ၏အသက်အဘို့အအရှိဆုံးအသုံးဝင်သောအရည်အချင်းများတွေထဲကခဏရဲ့အသိပေးစာမှာကာရာအိုကေသီခငျြးဆိုဖို့စိတ်အားထက်သန်ခဲ့တဲ့သူကပြောပါတယ်! ရှိမုနျ၏အစောပိုင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက် GAIL လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်အခြားဘာသာစကားများပြောဆိုကြသူများမှသင်ကြားရေးအင်္ဂလိပ်တစ်ဦးမာစတာပြီးစီးခဲ့သည်။ သူမသည်ဗဟို၏ပူနွေးသော, မိသားစုလေထုနှင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကျောင်းသားများကိုတွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းနှစ်သက်တော်မူ၏။ သီချင်းဆိုခြင်း, ရေကူးခြင်းနှင့်စာအရေးအသားဒရာမာပုံကြမ်းသူမ၏အကြိုက်ဆုံး pastime တချို့ရှိနေပါတယ်။
ဘာသာဗေဒ MA CELTA မှ Lena Payne MS & BA ။
လီနာကိုယူကရိန်းနိုင်ငံ၊ ကိယက်ဗ်တွင်မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သည်။ သူမသည်ဘာသာဗေဒဆိုင်ရာမဟာဘွဲ့ရရှိထားပြီး CELTA အရည်အချင်းနှင့် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်စတင်သင်ကြားခဲ့သည်။ လီနာက“ အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံရှိကျောင်းသားများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်သည်။ သူတို့တိုးတက်လာသည်ကို မြင်ရ၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိရန်သင်ယူသည်။ သင်ကြားပေးနေစဉ်အတွင်းကျောင်းသားများသည်စာသင်ခန်းအတွင်းဝေမျှရန်အသင့်ဖြစ်သည့်ဘဝအတွေ့အကြုံများစွာကိုယူဆောင်လာသည်။ သို့မှသာဆရာတစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်ဘယ်တော့မှသင်ယူခြင်းမရပ်တော့ပါ။ စိတ်အေးလက်အေးနှင့်ကြိုဆိုပွဲလေထု "။ သူမအားလပ်ချိန်များတွင်လီနာသည်ပြဇာတ်ရုံသို့သွားရန်၊ ဆဲလ်ဆာခုန်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း (မြင့်လွန်းခြင်းမရှိ) နှင့်သူမ၏မိသားစုနှင့်သူတို့၏ခွေး Meadow တို့နှင့်အတူလမ်းလျှောက်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။